Quique Setien Macalinka Barcelona Ayaa Sheegay In Lionel Messi Uu Sii Dheeraysan Doono Joogitaanka Camp Nou? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Quique Setien Macalinka Barcelona Ayaa Sheegay In Lionel Messi uu Sii Dheeraysan Doono Joogitaanka Camp Nou?
Tababaraha kooxda Barcelona Quique Setien ayaa sheegtay in kubada cagta ay aheyd meel koontarool laheyd ka hor qalalaasaha adduunka madaama uu ku adkaystay in Lionel Messi uu sii dheereysan doono joogitaankiisa Camp Nou.
Isboorti badan ayaa taageeray cudurka faafa ee coronavirus, iyadoo warshadaha kubada cagta ee bilyanka doollar ay la tacaashay dharbaaxo halis ah maadaama naadiyada iyo horyaalada ay wajahayaan qatar hor leh.
In kasta oo Setien uu wali hubanti yahay ugu yaraan hal joogto ah, iyada oo Messi uu sii watay waayihiisa Barcelona illaa 2020-21, waxa uu u arkaa ciyaarta balaadhan iyo silica haddii ay ahaan lahayd in si fiican loogu diyaariyo.
Waxaa la weydiiyay hadii koox kale ay awoodi karto haatan inay bixiso lacag sida 222 milyan euro oo ay ku qaadatay inay kaga iibiso Neymar qandaraaskiisa Barcelona labo sano iyo bar ka hor, Setien ayaa ka xumaaday rajadiisa.
“Maya, uma maleynaayo inuu jiro qof waxbadan qarash gareyn kara,” ayuu u sheegay wargeyska Talyaaniga kasoo baxa ee La Gazzetta dello Sport.
Shirkado yaryar ayaa biyo haysta duruufaha dhexdooda. Shirkado badan ayaa ku noolaa xad ahaan markii ugu horreysay ee xaalad khatar ahna ay galaan qalalaase. Kubadda cagta ayaa ku nooshahay si aan loo xakameyn.
Setien wuxuu leeyahay baahi weyn ayaa loo qabaa in kubada cagta ay soo laabato, laakiin wuxuu hayaa boos celin ku saabsan ku soo laabashada garoonka.
Xilliga Isbaanishka ayaa dib u bilaaban kara bisha June, iyadoo kooxaha ay ku soo laaban doonaan tababarka bishaan.
“Way iska cadahay in qof walba rabitaankiisu uu yahay in markale dib loo bilaabo, waana isu diyaarineynaa, Si kastaba ha noqotee, waxaa si siman loo caddeeyay in xaaladdu ayan sahlanayn, oo ay ka kooban tahay saddex arrimood: wadnaha, oo si adag ugu riixaya garoonka, caafimaad, kaas oo ah inuu sii ahaado mudnaanta koowaad, iyo dhaqaalaha, maxaa yeelay xiisaddan ayaa soo food saartay adag” ayuu yidhi Setien.
“Waxaan dareemaynaa xilli naxdin leh inkasta oo aan leenahay damac aad u weyn, xitaa baahi aan caadi aheyn oo aan ku laabanayno ciyaarta, waxaan rabnaa inaan ku qabano kaliya nabadgelyo buuxda “
Setien shaki kuma jiro inuu ku guuleystaha lixda xiddig ee abaalmarinta Ballon d’Or Messi garoomada ka maqnaan doono, inta ka hartay xilli ciyaareedkaan iyo xilli ciyaareedka soo socda, taasoo dhimaysa suurtagalnimada bixitaan xilli-dhow.
Jimcihii ayaa xusayay 15 sano tan iyo markii uu Messi dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeysay ee Barcelona, ​​iyo hal sano tan iyo markii uu dhaliyay goolkiisii ​​600aad ee kooxda.
Waxaa la sheegayaa inuu kujiro qandaraaska Messi inuu si bilaash ah ugu dhaqaaqi karo dhamaadka xilli ciyaareed kasta, laakiin waxaa jira xiriir aad u adag oo u dhexeeya Argentine iyo kooxda reer Catalan taasoo umuuqata inaysan macquul aheyn.
Inter ayaa lagu qiimeeyaa inay xiiseyneyso Messi, laakiin Setien wax walaac ah ma uusan qabin, xitaa haddii uu khilaaf soo kala dhexgalay xiddiga kooxda iyo maamulka sare, gaar ahaan agaasime isboorti Eric Abidal, xilli ciyaareedkaan.
“Maya, maxaa yeelay taasi ma dhici doonto,” ayuu yidhi Setien, markii la waydiiyay inuu walwal qabo. “Messi iyo Barcelona marwalba way midoobi doonaan. Waa sidaas oo kale. Leo wuxuu joogaa Barca 20 sano mana jiro qof sharxi kara xaalad burburin.
Waxyaabaha qaarkood waxay ka dhacaan kooxahan waa weyn, waa iska caadi in khilaafaadyo jiraan. Laakiin waa la xaliyaa. Waxaa jira dareen weyn oo ka dhexeeya xiriirka u dhexeeya Messi iyo Barcelona, ​​oo ah wax dhaafsiisan lacag iyo danaha.
“Wax walba waa in la sameeyaa si Messi loo taageero sida ugu fiican si ay Barcelona u sii wadato guulaha sida 15kii sano ee la soo dhaafay.”
Kooxda Wasaarada Caafimaadka Oo Heshiis Cusub La Saxiixatay Ciyaartoy Ka Mid Noqday Kooxdaasi?
Madaxa fulinta Inter Milan Oo Xaqiijiyey Inay ku Dhowyiin Christian Ereksen
CONMEBOL Oo FIFA Ka Codsatay In Dib Loo Dhigo Bilowga Isreeb Reebka Koobka Aduunka Ee 2022?